होसियार!! बजारमा यसरी फैलिदै छ नक्कली नोट : प्रिन्टिङ प्रेस चलाउनेदेखि फिल्म निर्मातासम्म संलग्न - Naya Pusta
होसियार!! बजारमा यसरी फैलिदै छ नक्कली नोट : प्रिन्टिङ प्रेस चलाउनेदेखि फिल्म निर्मातासम्म संलग्न
काठमाडौं : काठमाडौंबाट ठूलो परिणामको नक्कली नाेटसहित ६ जना पक्राउ परेका छन् ।
त्यसपछि चारढुङ्गेमा रहेको तेजेनजङ थापाको घरमा रहेको प्रिन्सेस मुभिज प्रालिका सञ्चालक माधवराज वाग्लेको कोठमा खानतलासी गर्दा १ हजार दरका नेपाली नक्कली नोट दुई करोड बाउन्न लाख बरामद भयो । लूट, लूट २ तथा रेशम फिलिलीका निर्मातासमेत रहेका वाग्लेले अाफूले फिल्मकाे छायाँकंनका लागि नक्कली नाेट छापेकाे बताएका छन् । केही नाेटमा ‘फिल्म प्रयाेजनका लागि’ भनेर समेत लेखिएकाे छ ।
भक्तपुरमा डिप बोरिङ गर्दा आगोको मुस्लो निस्कियो, नियन्त्रणमा आउन सकेन
उडुसले हैरान बनायो ? जान्नुहोस्, उडुस भगाउने घरेलु विधिहरु